A ga-akpọ Fulani ọchịehi 'oyiegwu'? - BBC News Ìgbò
Nkenke aha onyonyo Onwere ndị Fulani na-achị ehi bu egbe ukwu agagharị
Mkpamkpa a na-ebo ndị Fulani na-achị ehi emela ka ọtụtụ ndị mmadụ jụọ ihe mere ejịghị kpọ ha ndị 'oyiegwu.'
Cheta na arụ dị icheiche, dịka ogbugbu mmadụ na ịgba akụnaụba ọkụ na-akpa na Benue, Zamfara, Taraba nakwa steetị ndị ọzọ na Naịjirịa bụzi ihe a na-akọ ụbọchị niile na Naịjirịa.
Ndị gọọmentị kwuru na nsogbu a sitere na esemokwu dị n'etiti ndị na-achị ehi na ndị ọrụugbo, mana ndị mmadụ na-akọwa na ihe bụ mkpamkpa ndị Fulani na-achị ehi na-akpa iji chụpụ ndị mmadụ n'ala nna ha nyere ha.
Otu onye kwenyere siri ike na ndị Fulani na-achị ehi nwere atụmatụ a bụ Sịnatọ Eyinnaya Abaribe.
Abaribe kwuru uche ya na mkparịtaụka ya na BBC Igbo nwere sị na ebụnobi ndị Fulani ochie-ehi ji egbusi ndị mmadụ ma mebie ihe ha kọọrọ bụ iji nara ha ala ha.
Falana: Atala Buhari ụta maka omume ndị na-achị ehi
Akpamike ndị Fulani mekwara ka ụfọdụ dịka aka na-achị Benue bụ Samuel Ortom na onye bụbụ Mịnịsta Nchekwa Naijria bụ T.Y. Danjuma kwusie ike ka ndị mmadụ chekwawa onwe ha maka gọọmentị agaghị eme ya.
Mana ugbua, ndị mmadụ na-asị ka gọọmentị etiti tinye aha ndị Fulani na-achị ehi ka ndị na-eyi egwu dika o tinyere aha ndị Boko Haram na otu Ipob.
Ụfọdụ sị na yabụrụ na gọọmentị tinyere Ipob, bu ndị amaghị ka ndị na-egbu mmadụ ma ọ bụ emebi akụnaụba ka ndị 'oyiegwu', kedụ ihe aha ndị Fulani nọ na ememina ndị mmadụ kwa mgbe ejighị dị ya?
Ọkachasi ebe ndị Bekee kpọrọ 'Global Terrorism Index', bụ ihe eji agbakọ ndị na-eyi egwu n'ụwa niile gụnyere ndị Fulani na-achi ehi n'ọkwa nke anọ n'ọgụgụ ndị ka akpa ike na-afọ 2015.
Nkenke aha onyonyo Obụghị ndị Fulani na-achi ehi niile na-akpa ike a
Ndị haziri Global Terrorism Index ahụ kwụrụ na ndị ọchịehi a sitere n'ime ndị na-asụ asụsụ Fula, bụ ndị si mba dị icheiche na mpaghara ọdịda-anyanwụ Afịrịka. Mgbe ahụ, ha na-ekwu na ndị ọchịehi gbụrụ mmadụ 80 na afọ 2013, gbuo 1,229 na 2014.
Ugbua, afọ ka na-agba ọkara, mana ndị nwụrụ n'akpamike a a na-ebo ndị Fulani eruola 1000.
Mana, ajụjụ a na-ajụzị bụ ihe ga-eme ka etinye aha ndị ọchịehi ka ndị na-eyi egwu.
Ndị Fulani na-achị ehi ha abu ndị oyiegwu?
Ọ ga-amasị ọtụtụ mmadụ ma ya bụrụ na gọọmentị gara n'ihu kpọ ndị ọchịehi ndị na-eyi egwu, mana ọ bụghị ihe ga-adị mfe ma ya bụrụ na gọọmentị etiti etinyeghị uche na ya.
Na mbụ, ịkpọ ndị ọchịehi ndị oyi egwu ga adị ka ịkpọ mmadụ ncha na-achi ehi ndị oyi egwu, ma ọbụ isi na ndị Igbo niile so kpa ike ndi mmadụ one na one kpara
Obu eziokwu na otu akpọrọ Mayetti Allah na ekwuchịtere ọnu ndị na-achi ehi, mana ha na-agọ na-obụghị ndị otu ha na-akpa ike a niile
N'abụọ, ndị ọchị ehi a na-akpa ike a abughị ndị a ma ama, maka ha na-eme ka ndị otu nzụzọ. Ha na-akpa ike n'abali.
Nichola Ibikwe bụ onye ntaakụkọ na-achọpụta ihe zoro ezo gwara BBC Igbo na ọ bụ eziokwu na ọ ga-arịa ahụ ịkpo ndị ọchi ehi niile ndị oyi egwu, gọọmentị kwesiri ikewapụ ndị na-akpa ike n'ime ha.
O gakwara n'ihu kwuo na ndị a na-akpa ike a bu ihe ndị Bekee kpọrọ "militia" n'ime ndị ochị ehi, sị na-ekwapụ ha, a ga-ekonyewe ha aha dị ka ndị na-ehi egwu.
Maazị Ibekwe si na ihe eji ekenye otu dịka ndị na-eyi egwu bụ ya bụru na ha na eme ihe na ehi ndị mmadu, maọbu obodo egwu.
Ndị a na egwuịsị mmadụ ma na emebi akụnaụba na ebe dị icheiche na-eme ya ka ha were yie ndị mmadụ egwu were chụpụ ha na ala ha, Ibekwe kwuru.
Nkenke aha onyonyo Ogbugbu ndị nso Kraist na-ewe Trump iwe
Ka Buhari na Trump nwere mkparịtaụka ụbọchị Monde, Trump tinyere ọnụ n'ihe a na-eme na Naịjirịa dịka o sirii metụta nchekwa, were si na obi adịghị ndị Amerịka mma maka ogbugbu mmadu na-eme na Naịjiria.
Ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu na okwu a ga-eme ka Buhari tinye uche etu okwesiri n'okwu ndi ọchịehi na mkpamkpa a ha na-akpa.
Amabeghị ma ọ ga-eme otu a, mana tupu ọ gawa Amerịka, gọọmentị Buahri si na ha ga-amachi ichi ehi na-agagharị na steeti ebe ogbugbu mmadụ a kachasi na Naịjirịa.
Lee ihe ndị Buhari na Trump kpara taa
Ụzọ anọ Buhari jiri yie Trump
Chelsea emechiela akwụkwọ n'iko FA
Ihe mere ndị Emii jiri na-akwanyere Ọkazị ugwu
Ọkụ ewerela ahịa osisi dị na Legọs tarịe